BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/30/20130အကြံပြုခြင်း
လပွတ္တာမြို့နယ် ကန်ဘက်ကျေးရွာက မီးဘေးသင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ကူညီကြဖို့
Maung Ne Lynn Aung
လပွတ္တာမြို့နယ် ကန်ဘက်ကျေးရွာက မီးဘေးသင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကို ကူညီကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်
လပွတ္တာမြို့နယ်၊ ကန်ဘက်ကျေးရွာကြီးမှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်နေ့ညက လောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့ မီးဘေးဒဏ်ကြောင့် အိမ်ခြေ ၂၃၁ အိမ် ပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီး၊ လူပေါင်း ၁၁၀၈ ယောက် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြို့သူမြို့သားတွေ စုစည်းပြီး ကူညီရေး အစီအစဉ်တွေ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ဆောင်းတွင် အချိန် ဆိုတော့ စောင်၊ ခြင်ထောင်၊ အ၀တ်အစား ဒါတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ အစားအသောက်အတွက်လည်း အခုမနက်က စပြီး ပို့နေပါပြီ။ မနက်ဖြန်ကျရင်လည်း မြို့က ပဲ့ထောင်တွေ ထပ်ပြီး ရိက္ခာနဲ့ အ၀တ်အထည်တွေ သွားပြီး ပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မီးဘေးဒဏ်သင့်တဲ့ ကန်ဘက်ရွာက အထက်တန်းကျောင်းမှာ သူငယ်တန်းကနေ ဒဿမတန်းအထိ ကျောင်းသားပေါင်း ၁၇၅ ယောက် ပညာသင်ယူနေကြပါတယ်။ ဆယ်တန်း နှစ်ကျ အပြင်ဖြေ ကျောင်းသားတွေပါ ထည့်ပြီး တွက်ရင် တစ်ရွာလုံးမှာ ကျောင်းသားပေါင်း ၂၀၀ အနည်းဆုံး ရှိပါလိမ့်မယ်။ အစားအသောက်နဲ့ ရိက္ခာတွေ ပို့နေပြီ ဆိုပေမယ့် ကျောင်းသုံး ပစ္စည်းတွေ လိုအပ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဒီတော့ကာ မီးဘေးသင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားတွေ အတွက် လှူကြပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း အိမ်ပြန်ရောက်နေတော့ မြို့မှာ နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုပြီး ကျောင်းသုံးပစ္စည်း ဖြန့်ဖြူးဖို့ စပြီး လုပ်နေပါတယ်။ ခန့်မှန်းလိုအပ်ချက် စာရင်းကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗလာစာအုပ် - ၃၀၀ ဒါဇင်
ဘောပင် - ၃၀ ဒါဇင်
ခဲတံ - ၃၀ ဒါဇင်
ပေတံနဲ့ ခဲဖျက် - ၂၀၀ ခု စီ
ကလေးတွေကို လှူချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီလို လှူလို့ ရပါတယ်။
၁၃၀၀ ကျပ် ဆိုရင် ဗလာစာအုပ် ၁ ဒါဇင်
၁၀၀၀ ကျပ် ဆိုရင် ဘောပင် ၅ ချောင်း
၅၀၀ ကျပ် ဆိုရင် ခဲတံ ၃ ချောင်းနဲ့ ခဲဖျက် ၁ ခု
၃၀၀ ကျပ် ဆိုရင် ပေတံ ၁ ချောင်း
အတန်းကြီးတွေ အတွက် စက်ဝိုင်းခြမ်း၊ ကွန်ပါ၊ ကျင်တွယ် ဒါတွေ လိုပါတယ်။ သူတို့ စာမေးပွဲမှာ မဖြစ်မနေ သုံးရမယ့် ပစ္စည်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
၀ိုင်းဝန်းကူညီမယ် ဆိုရင်တော့ ပစ္စည်းတွေကို ကလေးတွေ လက်ထဲ ရောက်အောင် ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် သွားပြီး ဝေပါ့မယ်။ ဇန်န၀ါရီ ၁ ရက်နေ့မှာ ကျွန်တော် အဲဒီကို သွားပြီး ဝေဖို့ရာ စီစဉ် ထားပါတယ်။ အခု ဗလာစာအုပ် စပြီး မှာထားပါပြီ၊ ရသလောက်ကို အရင်ဆုံး ဝေပါ့မယ်။
ကလေးတွေကို ကူချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့် အိမ်ဖုန်း ၀၉၄၉၇၄၄၄၀၇ နဲ့ ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေ ကိုဇော်မင်းသန်းရဲ့ ဖုန်း ၀၉၃၁၇၁၀၂၉၃ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းတွေ အမြန်ဆုံး ပေးနိုင်ဖို့ လိုနေပါတယ်။ အမြန်ဆုံး ကူကြပါ။ လှူချင်ရင် စာရင်း လှမ်းပေးလို့ ရပါတယ်။ ငွေကိစ္စကို ကျွန်တော် ရန်ကုန် ပြန်ရောက်မှ ရှင်းလို့ ရပါတယ်။ လာယူ ဆိုလည်း လာယူလို့ ရပါတယ်။ တစ်ထောင်၊ နှစ်ထောင် ဆိုလည်း မနည်းပါဘူး။ ကလေးတွေ စာအုပ်ဖိုး၊ ခဲတံဖိုး ရတာပေါ့။
ဓာတ်ပုံ - နှလုံးသားလပွတ္တာ
ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည် ၏ ချင်း ပြည် နယ် ခ ရီး စဉ် အ ရှင် ဆန္ဒာဓိက လိုက် ပါ မည်
မလေးရှား၌ မြန်မာအမျိုးသမီးနှစ်ဦး ရက်ရက်စက်စက် အသတ်ခံရ
ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၃
ယနေ့ (30-12-2013) တွင် ဂျာလန် ဘာရူ၌ မြန်မာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက် ရက်ရက်စက်စက်အသတ်ခံရသည်။ ၎င်းတို့အနက် တစ်ဦးမှာ ရက်ရက်စက်စက် လည်လှီးခံရပြီး သေဆုံးခြင်းဖြစ်သည်။ မလေးရှား မှုခင်းစုံစမ်းရေးအကြီးအကဲ မာဇလန် ကီဆာ၏ စကားအရ ရဲများမှ ဋ္ဌေးဋ္ဌေးသန်း (၁၉ နှစ်)၊ (လည်ပင်းလှီးဖြတ်ထားခံရ) ကို ချုံပုတ်တစ်ခုအတွင်းမှ (မလေးစံတော်ချိန်) 12:15 pm ၌ ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်တွေ့သောအလောင်းမှာ ဋ္ဌေးဋ္ဌေးသန်း၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ (မ)သန်း (၄၁ နှစ်) ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ် နှင့် မျက်နှာအား ဓားဖြင့် အချက်ပေါင်းများစွာ အထိုးခံထားရသည်။
2 Myanmar women found brutally murdered
BUKIT MERTAJAM: Two Myanmar women were found brutally murdered with one of them had her throat slit in Jalan Baru here today. State criminal investigations department chief Senior Assistant Commissioner Mazlan Kesah said police recovered the body of Htay Htay Than, 19, whose throat was slit, inabush at about 12.15pm. He said next to Htay's bloodied body was that of her friend, Than, 41, who suffered multiple stab wounds on her body and face.
သူလိုလူ နောက်တစ်ယောက် မလာနိုင်ဘူး
အိုဘားမား မရှိလည်း အမေရိကန်ဟာ အမေရိကန်ပါပဲ
ဗလာဒီမာပူတင်မရှိလည်း ရုရှားဟာ ရုရှားပါပဲ
လီရှင်ပင်း မရှိလည်း တရုတ်ဟာ တရုတ်ပါပဲ
ဒေးဗစ်ကင်မရွန်း မရှိလည်း ဗြိတိန်ဟာ ဗြိတိန်ပါပဲ
ဖရန်ဆွာအော်လွန်း မရှိလည်း ပြင်သစ်ဟာ ပြင်သစ်ပါပဲ
အိန်ဂျလာမာကဲလ် မရှိလည်း ဂျာမန် ဟာ ဂျာမန်ပါပဲ
မက်မိုဟန်ဆင်း မရှိလည်း အိန္ဒိယ ဟာ အိန္ဒိယပါပဲ
ဦးသိန်းစိန် မရှိလည်း မြန်မာဟာ မြန်မာပါပဲ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မရှိလည်း မြန်မာဟာ မြန်မာပါပဲ
အာရှဟာ အာရှပါပဲ အရှေ့တောင်ဟာ အရှေ့တောင်ပါပဲ
ဒါပေမယ့် နောက်တစ်ယောက် မလာနိုင်ဘူး အဲ့ဒါ သေချာတယ်
(ဖျာပုံနီလုံဦး- ၃၀-၁၂-၂၀၁၃ ဒီလှိုင်း)
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/30/2013 1 အကြံပြုခြင်း
ဘယ်တုန်းကမှ နိုင်ငံခြားသား မခံထားဘူး။ သက်သက်မဲ့ ကလိန်ကျတာ ။
KIM နဲ့ ALEX က မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပဲ ဘယ်တုန်းကမှ နိုင်ငံခြားသား မခံထားဘူး။ သူတို့မေမေကို မစ္စ အဲရစ်လို့ခေါ်ရင်တောင်သူတို့ဘယ်တုန်းကမှလက်မခံခဲ့ဘူး။ ကင်း(မ)ရဲ့ကျောင်းသားကဒ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံသား ဗုဒ္ဓဘာသာလို့ပဲရှိတယ် မြန်မာနိုင်ငံသားပဲဖြစ်တဲ့ ကင်းနဲ့ အဲလက်ဇန္ဒားကို သူတို့ပဲ BLACK LIST လုပ်တာ
သူတို့ဥပဒေက သူတို့ပါးစပ်မှာပဲရှိနေတာ ။သက်သက်မဲ့ ကလိန်ကျတာ ။
ရိုင်းလိုက်တာ ။ ဒီစစ်တွေ ဒီဖွတ်တွေရဲ့ ရိုင်းချက်က ကမ်းကုန်ပါတယ် ။
မွေးကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်သာ ခံယူခဲ့တဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ နိုင်ငံသားအဖြစ် ရပ်တည်မူကို ၁၉၈၉မှာ ဖျက်သိမ်းခဲ့တယ် ။
လင် နေမကောင်းတော့ မြန်မာပြည်ကို ၁၉၉၈ ကတည်းက လာခွင့်ပိတ်ပင်တယ် ။
လင် သေခါနီး ၁၉၉၉ ပုပ်ဂျွန်ပေါလ်ရဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချက်ကိုတောင် စောက်ဂရုမစိုက်ပဲ မယားကို နိုင်ငံထဲက ထွက်သွားလေမလားဆိုပြီး အကျပ်ကိုင်ခဲ့တယ် ။
အကျယ်ချုပ်ဘ၀မှာ ၁၅ နှစ်လုံးလုံး ဖုန်းဖျက်ထားခဲ့တယ် ။ သားနှစ်ယောက် ခမျာ မွေးနေ့လေးတောင် အမေဖြစ်သူရဲ့ အသံကို မကြားရ ။ ဘဒ်ဒေးကဒ်လေး မရ ။
အခုလည်း မိခင်ဖြစ်သူ သမ္မတ ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင်တာ သားနှစ်ယောက်အပေါ်ကို မူတည်ပြန်အောင် အကွက်ဆင်ကြပြီ ။
သားနှစ်ယောက်ထဲက တစ်ယောက်က မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ် မခံယူချင်ဘူး ၊ ပြန်မလာနိုင်ဘူး ဆိုရင် .....
မိခင်ဖြစ်သူသာမက ၊ အဘိုးဖြစ်သူကိုပါ နာမည်ပျက်အောင် တည်ကြက်အဖြစ် အသုံးချကြပြန်ပြီ ။
အမေစု သားနှစ်ယောက်စလုံး မြန်နိုင်ငံသား ပြန်ပြောင်းမှ တရားဝင်မယ်တဲ့ တမျိုးပြီးတမျိုး မရိုးရဘူးနော် ။
တော်ကြပါတော့ အမေစုကို မယုတ်မာကြပါနဲ့တော့
ဖွင့်ထားမိတဲ့ ကင်မရာကနေ မြောက်ကိုရီးယားတွေကို တွေ့ခဲ့ရ
မဒမ်လျူယန်ဒေါင် နှင့် ဦးသန်းရွှေတို့ နေပြည်တော်၌ လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့
၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်က တရုတ်ဒုဝန်ကြီးချုပ် မဒမ်လျူယန်ဒေါင် နှင့် ဦးသန်းရွှေတို့ နေပြည်တော်၌ လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့
၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်က တရုတ်ဒုဝန်ကြီးချုပ် မဒမ်လျူယန်ဒေါင် နှင့် ဦးသန်းရွှေတို့ နေပြည်တော်၌ လျှို့ဝှက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်ဟု နေပြည်တော်သတင်းရပ်ဝန်းမှ လျှို့ဝှက်သတင်းအဖြစ်ပေးပို့ခြင်းဖြစ်သည် ၊
တွေ့ဆုံရာတွင် ဧည့်သည်တော် မဒမ်လျူယန်ဒေါင်မှ ဦးစွာ ဦးသန်းရွှေ သို့ ဂါရဝပြုစကားပြောကြားခဲ့ပါသည် ၊
အဆွေတော် မြန်မာနိုင်ငံ၏ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးသန်းရွှေ ကို ယခုလို ကျန်းကျန်းမာမာ နှင့် တွေ့ရသည့်အတွက် လွန်စွာမှ ဝမ်းမြောက်မိပါကြောင်း ၊ အဆွေတော် ခေါင်းဆောင်ကြီး ဦးသန်းရွှေ၏ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သော လုပ်ရပ်ဖြစ်သည့် ကျောက်ဖြူကူမင်း
ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့မှုနှင့်ပတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ သမ္မတကြီး ရှီကျင်းပင်မှ အထူးပင် အသိအမှတ်ပြု ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ၊ အဆွေတော်ကြီးဆက်လက်ခွင့်ပြုထားသော ကျောက်ဖြူကူမင်း ရထားလမ်းနှင့် ကားလမ်း စီမံကိန်းကိုလည်း
အမြန်တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ မြစ်ဆုံဆည်တည်ဆောက်မှုကိုလည်း မကြာမီပြန်လည်ခွင့်ပြုမည်ဟု သိရသည့် အတွက် ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါကြောင်း ၊ လက်ပံတောင်းတောင် နှင့် မြွေတောင်ဖားတောင် စီမံကိန်းများကိုလည်း ဆက်လက်လုပ်ကိုင်မည်
ဖြစ်ပါကြောင်း နှုတ်ခွန်းဆက်ပြောကြားပါသည် ၊
ဦးသန်းရွှေမှ အဆွေတော် လာရောက်လည်ပတ်သည့် အတွက် ဝမ်းသာပါကြောင်း ၊ မြန်မာလူမျိုးများအတွက် မြန်မာလူမျိုးတိူ့၏ စရိုက်လက္ခဏာကို သိသူသာလျှင် ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သင့်ကြောင်း ၊ ကျွန်ုပ်ကို မြန်မာခေါင်းဆောင်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသဖြင့်
ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ၊ မိတ်ဆွေကောင်း ပီသစွာ ဆက်လက် လက်တွဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကချင်မြောက်ပိုင်းဒေသမှ ယူရေနီယမ် နှင့် ရှားပါးသတ္တတူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းကို အမြန်စတင်အကောင်အထည်ဖော်လိုပါကြောင်း ၊ ၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်း
စီမံကိန်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမြဲတမ်းနေထိုင်လိုသူ အဆွေတော်တို့ထံမှ နိုင်ငံသားများကို စိတ်ချရသည့် အနေအထားဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ၂၀၁၅ အလွန်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ မဖြစ်ရေးအတွက်
အစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ အဆွေတော်တို့ဘက်မှလည်း ယခင်နည်းတူ လိုအပ်လျှင် ဗီတိုအာဏာနှင့် ကာကွယ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်သာမက အဆွေတော်တို့ တရုတ်နိုင်ငံ အတွက်ပါ အန္တရယ်ရှိသူ
အဖြစ် သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ကြောင်း ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး ကစားကွက်များကို စိတ်ရှည်ရှည်နှင့် စောင့်ကြည့်စေလိုကြောင်း ၊ လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲများ၏ ဦးစီချုပ်မှာ ယနေ့တိုင် မိမိပင်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကောလဟာလများကို မယုံစေလိုကြောင်း ၊ အမေရိကန်ကို
မချစ်သော်လည်း အောင့်ကာနမ်း ဗျူဟာဖြစ် ဆက်ဆံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ မြောက်ကိုးရီးယားနှင့် သံတမန် အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုဟု ဂတိပေးနိုင်ကြောင်း ၊ လိုအပ်ပါက ကိုကိုကျွန်းကို အမေရိကန်သို့ ခေတ္တငှားရမ်းအသုံးပြုခွင့် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊
အဆွေတော်တို့ထံမှ စစ်လက်နက်ပစ္စည်းများဆက်လက်ဝယ်ယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လှန်ပြောဆိုခဲ့သည် ၊
ထို့နောက် ဦးသန်းရွှေနှင့် တရုတ်အစိုးရ အဆင့်မြင့် အရာရှိများအကြား တိုက်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ဆက်သွယ်နိုင်သည့် သီခြားဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများအကြောင်း ဆက်လက်ပြောဆိုကြပါသည် ၊
(နေပြည်တော်မှ ပေးပို့လာသော လျှို့ဝှက်သတင်းဖြစ်သည်)
လူတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးခရီး အခမဲ့ကူညီတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကို
အတ္တကြီးတဲ့ ကားတစ်စီးကြောင့် ခုတော့ အတားအဆီးဖြစ်ရပြီ ။
လူတိုင်းရောက်မယ့် ဒီလမ်းခရီးအတွက် လူလိုတွေးပြီး လူစိတ်မွေးကြပါကွာ ။
(နာရေးကူညီမှု့အသင်း (ရန်ကုန်) )
(နေပြည်တော်မှ ပေးပို့လာသော အရေးပေါ်သတင်းဖြစ်ပါသည် )
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဝင် အများစုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အစိုးရအဖွဲ့နှင့် လက်ရှိပါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း နာယကအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တို့အကြား ပွတ်တိုက်မှုများရှိနေချိန်တွင် ပါတီတွင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှု အားနည်းနေကြောင်း ပါတီဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ၀န်ခံပြောကြားလိုက်သည်။
ကြံ့ဖွတ်ခြေဥပြင်ဆင်ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတဖြစ်ရေး ကန့်သတ်ချက်ပြင်ဆင်မှု မပါဝင်
Monday, 30 December 2013 23:09
အာဏာရပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပသော နေပြည်တော်ရှိ ပါတီဌာနချုပ်အား တွေ့ရစဉ်
"ဒီဆွေးနွေးပွဲကတော့ ဒီမိုကရေစီ တော်တော်ဆန်ပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးခန့်အပ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးရာမှာ ၀န်ကြီးချုပ်အချို့က မကြိုက်ကြဘူး။ ရွေးကောက်ခံ လွှတ်တော်ကိုယ်စားတွေက ရွေးချယ်ခန့်အပ်မှ ဒီမိုကရေစီနဲ့ ကိုက်ညီမှာပါ။ ဒါကြောင့် ပြင်ဆင်ဖို့ဆွေးနွေးရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ ၅၉ (စ)လုံးမှာလည်း လျှော့ချဖို့ သဘောတူဆုံးဖြတ်တယ်။ အရင်က သားသမီးရဲ့ဇနီး၊ ခင်ပွန်းနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ရင် သမ္မတဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးလို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။ ဒါကိုလျှော့ချဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့လည်း သားနှစ်ယောက်ကို မြန်မာနိုင်ငံသား ခံယူခိုင်းလိုက်ရင် သမ္မတဖြစ်ခွင့်ရှိသွားပြီပေါ့"ဟု ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဗဟိုကော်မတီဝင်တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအား ပြင်ဆင်လိုပါက ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ထောက်ခံရမည်ဟူသည့်အချက်အစား ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများသည် အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်သာမက ပါတီတွင်လည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်သည်ဟု ပြင်ဆင်ရန်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ဒုတိယသမ္မတဖြစ်ရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ထားသည့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ထဲမှသာ ရွေးချယ်ခန့်အပ်နိုင်ရန် အချက်များအား ပြင်ဆင်ထားကြောင်း သိရသည်။
အာဏာရ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ရန်ကျင်းပသည့် ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား ရွေးကောက်ခံပြည်သူ တစ်ရာခိုင်နှုန်း ထောက်ခံပါက ဖြုတ်ချနိုင်သည့်အချက်အစား ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းထောက်ခံမှုဖြင့်ဟု ပြင်ဆင်ထားကြောင်း၊ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများအားရွှေ၊ သတ္တုများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုရန်၊ မြို့နယ်၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများသည် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ရမည်ဟူသည့် အချက်အစား ပြည်သူကရွေးချယ်သူကိုသာ ခန့်အပ်ရမည်ဟူသည့်အချက်များအား ပြင်ဆင်ရန် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အာဏာရပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ဆွေးနွေးပွဲတွင် ဦးစားပေးပြင်ဆင်ရန်နှင့် ဒုတိယဦးစားပေး ပြင်ဆင်ရန်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ ၅၉ (စ)သည် ဒုတိယဦးစားပေးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ ၀န်ကြီးများအား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ ရွေးချယ်ရမည့်အချက်များသည် ဦးစားပေးပြင်ဆင်ရန် သတ်မှတ်သည့်အချက်များတွင် ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 12/29/20130အကြံပြုခြင်း
ရွှေလင်ဗန်းကျေးရွာ၌တုတ်၊ ခဲများ ကိုင်ဆောင်၍ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွား
လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရွှေလင်ဗန်းကျေးရွာအတွင်း တဲထိုးနေထိုင်ရန်လာရောက် ပြင်ဆင်သူ ၁၀၀ ခန့်နှင့် ဒေသခံရွာသား ၃၀၀ ကျော်တို့ အငြင်းပွားရာမှတစ်ဆင့် တုတ်၊ ခဲများကိုင်ဆောင်၍ ရုန်းရင်းဆန်ခတ် အခြေအနေတစ်ခု ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် နံနက် ၁ နာရီခန့်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမှာ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် ည ၈ နာရီခွဲခန့်မှစ၍ လှိုင်သာယာ၊ ယောအတွင်းဝန် ဦးဖိုးထောင် လမ်းနှင့် ကနောင်မင်းသားကြီး လမ်းထောင့်တွင်ရှိသော မြေနေရာများပေါ်တွင် အိမ်ရာမဲ့ဟုဆိုသော လူအယောက် ၁၀၀ ခန့်မှ တဲထိုးနေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်မှုများရှိနေသည်ကို ရပ်ကွက်နှင့်မြို့နယ်မှ တာဝန်ရှိသူများ သွားရောက်စစ်ဆေးသည့်အချိန်မှစတင်ကာ တင်းမာမှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ယင်းအပြင် အဆိုပါလမ်းပေါ်သို့ ဖြတ်သန်းသွားသော ယာဉ်များ၊ လူများကို နေထိုင်ရန်ပြင်ဆင်နေသူတို့မှ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများ၊ ခြိမ်းခြောက်လုပ်ဆောင်မှုများ ပြုလုပ်မှုကြောင့် ဖြစ်စဉ်မှာ ပိုမိုကြီးထွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရွှေလင်ဗန်းကျေးရွာအတွင်း နေထိုင်သူဒေသခံများ၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။
ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု မတိုင်မီဖြစ်ပွားခဲ့သော ဖြစ်စဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ရွှေလင်ဗန်းကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူတစ်ဦးက "ကျွန်တော်တို့ အဲဒီလမ်းကဆိုင်ကယ်နဲ့ ဖြတ်သွားတော့ ယာဉ်ကိုတားတယ်။ ပြီးတော့ လေးခွတွေနဲ့ပစ်တယ်။ အဲဒီအပြင် ရပ်ကွက်ကိုပါ မီးရှို့ပစ်မယ်"ဟု စကားသံများပင် ထွက်ပေါ်လာကြောင်း ဆိုသည်။
သို့သော် မိမိတို့မှာ ပြည်သူအချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ချင်း လုပ်ဆောင်မှုများ မပြုလုပ်ကြောင်း၊ အာဏာရှင်ခရိုနီများ ရရှိထားသောမြေနေရာများတွင်သာ ကျူးကျော်မှုကို ပြုလုပ်ထားကြောင်း၊ ယင်းအပြင် လက်ရှိနေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများမှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် နာဂစ်ဖြစ်စဉ်ကြောင့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရသူ အများဆုံးဖြစ်ကြောင်း တဲထိုးနေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်သူအဖွဲ့မှ ဦးဘကျော်က ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု မဖြစ်ပွားမီ ပြောဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မီးရှို့မည်ဟု ထွက်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့် ရွှေလင်ဗန်းရွာသားများမှာ စုရုံးမှုပြုလုပ်ကာ တုတ်၊ အုတ်ခဲအစရှိသည့် ပစ္စည်းများ ကိုင်ဆောင်ထားသည့်အပြင် တဲထိုးနေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူ ၁၀၀ ခန့်မှလည်း တုတ်၊ ဓား အစရှိလက်နက်များ ကိုင်ဆောင်ထားပြီးနောက် နှစ်ဖက်အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် လူသုံးရာကျော်ရှိသော ရွာသားများက ကျူးကျော်နေထိုင်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများကို ဖယ်ရှားမှုများနှင့် ရိုက်နှက်ပစ်ခတ်၊ ထိန်းသိမ်းမှုအချို့ပင်ရှိခဲ့သော်လည်း မည်သည့်အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းမှ လာရောက်တားဆီးမှုများပင် မရှိခဲ့သည့်အပြင် ဖြစ်စဉ်မတိုင်မီကပင် ရွှေလင်ဗန်းကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ကိုမြင့်လှိုင်က "ကျွန်တော်တို့ ရဲစခန်းကိုတော့ အကြောင်းကြားထားပါတယ်" ဟု ဖြေကြားခဲ့သည်။
(ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် ရွှေလင်ဗန်းကျေးရွာအတွင်း ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု အခြေအနေကို တွေ့ရစဉ်)
(၂၀၁၂) ခုနှစ်အတွက် မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲရုပ်သံ
(၂၀၁၂) ခုနှစ်အတွက် မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲမှ အကယ်ဒမီဆုရှင်များ၏ ရင်ခုန်သံများ
ကလစ် PLAY ALL ကိုနှိပ်ပါ။ ၁၂ ဖိုင်တွဲထားသည်။
Ko Nay Myo
ဂျပု ဦးကျော်ဆန်း သာ “သမ” မရောက်ပဲ ပြန်ကြားရေးမှာပဲ ရှိမယ်ဆိုရင် “ဥ”ကတော့ ဆု မရနိုင်ပါဘူး…။ ဟုတ်တယ်လေ… “ဟိုဖက်ခြံက အကောင် ပုကွကွ.. စကားပြော ဘုကျကျ…” “အတင်းဝင်ကောက်တဲ့ ဟိုဖက်က ဂျပု… မလွန်ခင် တူ နဲ့ ထု…” “လူပါး ၀ လွန်းတဲ့ ဂျပု မျက်ခွက် မျက်စိထဲက မထွက်…” “မင်းကြက်အထီးက မဥတဲ့ဘ၀.. အဲ့တာ မင်းကိစ္စ မင်းမကျေနပ်ရင် ကိုယ်တိုင် ထိုင် ဥ ပါ…” ဆိုတော့ ခြင်းတောင်းလေးထဲမှာ ဦးကျော်ဆန်း က သူ့ကို ဥ ထိုင် ဥ ခိုင်းတယ်….၊ သူ့ကိုစောင်းပြီး ရိုက်တယ်…၊ ဒီအခန်းဖြတ်…၊ ဒီကားဖြတ်… ဆိုပြီး ပြီးသွားလိမ့်မယ် ထင်တယ်နော်….
လပွတ္တာမြို့နယ် ကန်ဘက်ကျေးရွာက မီးဘေးသင့် ကျောင်းသူ...
ဒေါ် အောင် ဆန်း စု ကြည် ၏ ချင်း ပြည် နယ် ခ ရီး စဉ် ...
မလေးရှား၌ မြန်မာအမျိုးသမီးနှစ်ဦး ရက်ရက်စက်စက် အသတ...
ဘယ်တုန်းကမှ နိုင်ငံခြားသား မခံထားဘူး။ သက်သက်မဲ့ ကလ...
ဖွင့်ထားမိတဲ့ ကင်မရာကနေ မြောက်ကိုရီးယားတွေကို တွေ့...
မဒမ်လျူယန်ဒေါင် နှင့် ဦးသန်းရွှေတို့ နေပြည်တော်၌ လ...
ကြံ့ဖွတ်ခြေဥပြင်ဆင်ရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတြ...
ရွှေလင်ဗန်းကျေးရွာ၌တုတ်၊ ခဲများ ကိုင်ဆောင်၍ ရုန်းရ...
(၂၀၁၂) ခုနှစ်အတွက် မြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ...